China In-Ground GL116 ifektri abakhiqizi | I-Eurborn
Izintambo ezingenawo amanzi
Isimbambiso esilihlelile esincanyana siqediwe ne-CREE LED Package ebalulekile. Ingilazi omnene. Ukwakhiwa kweMarine grade 316 Stainless Steel kukalwe ku-IP68. Umkhiqizo wokungcolisa kobubanzi obungu-60mm uqinisekisa ukusetshenziswa okuhlukahlukene. Izinketho zomshayeli ezimaphakathi zifaka phakathi izixazululo ezingashintsheka, i-1-10V ne-DALI. Lezi zikhanyiso ze-LED ezisemhlabathini zinokukhethwa kwamandla ka-1W, 1.3W, 3W, 3.5W. Ingalawulwa yi-RGB noma i-DMX RGB. Ukusetshenziswa kwe-lens yamaparele akukwazi ukugcina kuphela inani le-lumen lomphumela wokukhanya, kepha futhi kunciphisa ukukhanya. Ngaphezu kwalokho, enye i-GL116C yakhelwe ngomklamo wokukhanyisa uhhafu, ocebisa umphumela wokukhipha ukukhanya futhi wenze ukukhetha kwekhasimende kungabe kusaba yisidina. Idizayini yesikebhe somkhiqizo ayenzi nje ukuthi inqubo yokufaka ibe lula kakhulu, kepha futhi igwema ubungozi bokwebiwa kwesibani. Usayizi womkhiqizo ngu-60x45, futhi usayizi ofanele wenza indawo yokusetshenziswa ihluke kakhulu. Ingasetshenziswa njengokukhanyisa kwesinyathelo, amalambu wedeski, amalambu endlela, amalambu engadi, ukukhanya okulengiswe odongeni, amalambu e-LED angaphansi kwamanzi.
Umthombo we-LED Light Amandla Amandla aphezulu
Umbala Okhanyayo I-RGB, i-CW, i-WW, i-NW, i-Red, i-Green, i-Blue, i-Amber
Ukukhanya I-S12 ° / F45 °
Ukunikezwa kwamandla kagesi Akunjalo
Isilinganiso se-IP IP68
Izinga lokushisa elifanele -2O ° C ~ + 45 ° C
Impilo emaphakathi 5O, OOOHrs
Izesekeli (Ngokuzithandela) Yebo
Izicelo Ngaphakathi / Ngaphandle / Indawo / Ukuntywila
I-GL116 PHANSI KOKUKHANYA
Isibonelo No. Umkhiqizo we-LED Umbala Ugongolo I-PowerMode Okokufaka Izintambo Ikhebula Amandla Okukhanyayo Okukhanyayo Ubukhulu UkushayelaSize
I-GL116 ISIQILI CW, WW, NW, Red Green, Blue, Amber S12 / F45 Okwamanje okuqhubekayo Ama-350mA Uchungechunge 3M 2X0.75mm² Ikhebula 1W 100LM I-D60X45 D50
I-GL116D ISIQILI CW, WW, NW, Red Green, Blue, Amber S12 / F45 Amandla aqhubekayo 24VDC Iyafana 3M 2X0.75mm² Ikhebula 1.3W 100LM I-D60X45 D50
I-GL116C ISIQILI CW, WW, NW, Red Green, Blue, Amber S12 / F45 Okwamanje okuqhubekayo Ama-350mA Uchungechunge 3M 2X0.75mm² Ikhebula 1W 100LM I-D60X45 D50
I-GL116RGB U-Edison I-RGB 45 Okwamanje okuqhubekayo Ama-350mA Uchungechunge 2x3M 4X0.5mm² Ikhebula 3W Akunjalo I-D60X45 D50
I-GL116DMX-RGB U-Edison I-RGB S12 / F45 Amandla aqhubekayo 24VDC DMX Iyafana 1.1M 4X0.5mm² Ikhebula 3.5W Akunjalo I-D60X45 D50
I-DMX decoder yakhiwe * Ukusekelwa kwedatha ye-IES.
■ Imephu yephrojekthi
Langaphambilini Ngaphakathi-Ground GL140
Olandelayo: Ngaphakathi-Ground GL112H
Yonke imikhiqizo izofakwa bese ithunyelwa kuphela ngemuva kokuthi yonke imikhiqizo isidlulile ekuhlolweni kwe-index ehlukahlukene, futhi ukupakisha nakho kuyisiqeshana esibaluleke kakhulu esinganakwa. Njengoba izibani zensimbi engagqwali zisinda ngokwengeziwe, sikhethe ibhokisi lekhathuni elihamba phambili nelinzima kakhulu ukuthola imininingwane yokupakisha ukuze kuqinisekiswe ukuthi umkhiqizo ungavikelwa kahle ekuthintekeni noma emabhampini ngesikhathi sokuhamba. Umkhiqizo ngamunye we-Oubo uhambelana nebhokisi elingaphakathi eliyingqayizivele futhi lizokhetha uhlobo lokupakisha oluhambisanayo ngokuya ngohlobo, isimo kanye nesisindo sezimpahla ezihanjiswayo ukuqinisekisa ukuthi umkhiqizo ngamunye ugcwele ngaphandle kokushiya igebe phakathi kwebhokisi nomkhiqizo ulungisiwe ibhokisi. Ukupakisha kwethu okujwayelekile kunebhokisi langaphakathi elinsundu elinsundu nebhokisi langaphandle elinsundu. Uma ikhasimende lidinga ukwenza ibhokisi lombala elithile lomkhiqizo, singakwazi ukuwufinyelela, inqobo nje uma wazisa ukuthengisa kwethu kusengaphambili, sizokwenza ukulungisa okuhambisanayo kusigaba sokuqala.
Njengomkhiqizi osezingeni eliphezulu wezibani zensimbi engagqwali engaphandle, u-Eurborn unesethi yakhe ephelele yama laboratories okuhlola. Asinciki kakhulu kubantu besithathu abathethwe ngaphandle ngoba sesivele sinochungechunge lwemishini esezingeni eliphezulu kakhulu futhi ephelele, futhi yonke imishini ihlolwa njalo futhi igcinwe njalo. Qinisekisa ukuthi yonke imishini ingasebenza ngokujwayelekile futhi yenze ukulungiswa ngesikhathi esifanele nokulawulwa kokuhlolwa okuhlobene nomkhiqizo okokuqala ngqa.
Indawo yokusebenzela yase-Eurborn inemishini eminingi yobuchwepheshe kanye namadivayisi wokuhlola afana namahhavini ashubisa umoya, imishini yokuphefumula, ama-UV ultraviolet amakamelo okuhlola, imishini yokumaka i-laser, amakamelo okuhlola okushisa njalo nomswakama, imishini yokuhlola isifutho kasawoti, amasistimu wokuhlaziya we-spectrum we-LED asheshayo, ukusatshalaliswa ngamandla okukhulu uhlelo lokuhlola (ukuhlolwa kwe-IES), i-UV ephulukisa i-ovini kanye ne-elekthronikhi yokumisa ukushisa okushisa njalo njalo, njll. Singafinyelela uhlelo oluphelele lokulawula ikhwalithi kuwo wonke umkhiqizo esiwukhiqizayo.
Umkhiqizo ngamunye uzohlolwa 100% wepharamitha yokuhlolwa, ukuhlolwa kokuguga okungu-100% nokuhlolwa okungangenwa ngamanzi okungu-100%. Ngokweminyaka eminingi yokuhlangenwe nakho komkhiqizo, imvelo ebhekene nomkhiqizo iqine kaningi kunamalambu asendlini angaphandle angaphansi namanzi angaphansi kwamanzi. Sazi kahle ukuthi isibani kungenzeka singaziboni izinkinga esikhathini esifushane ezindaweni ezijwayelekile. Emikhiqizweni yakwa-Eurborn, sisebenza ngokukhethekile ngokuqinisekisa ukuthi isibani singafinyelela ukusebenza okuzinzile kwesikhathi eside ezindaweni ezahlukahlukene ezinzima. Endaweni ejwayelekile, ukuhlolwa kwethu kwemvelo okulingisiwe kucindezela kaningana. Le ndawo enokhahlo ingakhombisa ikhwalithi yamalambu e-LED ukuqinisekisa ukuthi ayikho imikhiqizo enesici. Kuphela ngemuva kokuhlolisiswa kwezendlalelo lapho u-Ober ezoletha khona imikhiqizo ehamba phambili kithi Isandla sekhasimende.
I-Eurborn inezitifiketi ezifanelekile ezifana ne-IP, CE, ROHS, i-patent yokubukeka ne-ISO, njll.
Isitifiketi se-IP: I-International Lamp Protection Organisation (IP) ibeka amalambu ngokuya ngohlelo lwawo lwe-IP lokufaka amakhodi ukuze kungabi nothuli, izinto eziqinile zangaphandle nokungena kwamanzi. Isibonelo, i-Eurborn ikakhulukazi ikhiqiza imikhiqizo yangaphandle efana namalambu angcwatshwe nangaphakathi, amalambu angaphansi kwamanzi. Zonke izibani zensimbi engagqwali zangaphandle zihlangabezana ne-IP68, futhi zingasetshenziswa ekusetshenzisweni okungaphakathi noma ngaphansi kwamanzi. Isitifiketi se-EU CE: Imikhiqizo ngeke isongele izidingo zokuphepha eziyisisekelo zokuphepha kwabantu, kwezilwane kanye nemikhiqizo. Umkhiqizo wethu ngamunye unesitifiketi se-CE. Isitifiketi se-ROHS: Kuyisilinganiso esiphoqelekile esisungulwe ngumthetho we-EU. Igama lalo eligcwele “Umhlahlandlela Wokukhawulela Ukusetshenziswa Kwezithako ezithile Eziyingozi Kumishini Kagesi Nekagesi”. It is ikakhulukazi esetshenziselwa ukulinganisa izinto ezibonakalayo nenqubo yokucubungula imikhiqizo kagesi neye-elekthronikhi. Kusiza kakhulu ezempilo yabantu kanye nokuvikelwa kwemvelo. Inhloso yaleli zinga ukuqeda i-lead, i-mercury, i-cadmium, i-hexavalent chromium, i-polybrominated biphenyls kanye ne-polybrominated diphenyl ether kwimikhiqizo kagesi neye-elekthronikhi. Ukuze sivikele kangcono amalungelo nezintshisekelo zemikhiqizo yethu, sinesitifiketi sethu sokubukeka patent semikhiqizo ejwayelekile kakhulu. Isitifiketi se-ISO: Uchungechunge lwe-ISO 9000 yindinganiso edume kunazo zonke phakathi kwamazinga amaningi wamazwe omhlaba asungulwe yi-ISO (Inhlangano Yomhlaba Wonke Yokwenza Okumisiwe). Leli zinga akukhona ukuhlola ikhwalithi yomkhiqizo, kodwa ukuhlola ukuphathwa kwekhwalithi yomkhiqizo enqubeni yokukhiqiza. Kuyizinga lokuphathwa kwenhlangano.
Umzimba wesibani womkhiqizo wenziwe ngensimbi engagqwali ye-SNS316L. Insimbi engagqwali engu-316 iqukethe iMo, engcono ekumelaneni nokugqwala kunensimbi engagqwali engama-304 ezindaweni ezinokushisa okuphezulu. I-316 inciphisa kakhulu okuqukethwe yi-Cr futhi inyusa okuqukethwe kwe-Ni futhi inyuse i-Mo2% ~ 3%. Ngakho-ke, ikhono layo lokulwa nokugqwala linamandla kune-304, elifanele ukusetshenziswa kumakhemikhali, emanzini olwandle nakwezinye izindawo.
2.Umthombo wokukhanya we-LED usebenzisa uhlobo lwe-CREE. I-CREE ingumakhi ohola phambili wokukhanyisa nomakhi we-semiconductor emakethe. Ubuhle be-chip buvela ezintweni ze-silicon carbide (SiC), ezingasebenzisa amandla amaningi esikhaleni esincane, ngenkathi ziqhathanisa Obunye ubuchwepheshe obukhona, izinto zokwakha nemikhiqizo ikhiqiza ukushisa okuncane. I-CREE LED ihlanganisa okonga amandla kakhulu kwe-flip-chip InGaN impahla kanye nenkampani ephathelene ne-G · SIC® substrate ibe yinto eyodwa, ukuze amandla amakhulu kanye nokusebenza kahle kwe-LED kutholakale ukusebenza kwezindleko ezinhle kakhulu.
3.Ingilazi isebenzisa ingilazi emnene + ingxenye yesikrini sikasilika, futhi ubukhulu bengilazi bungu-3-12mm.
I-4.Inkampani ihlale ikhetha ama-substrates e-high-conductivity aluminium ane-conductivity eshisayo ngenhla kwe-2.0WM / K. Ama-aluminium substrates asetshenziswa njengezinto eziqondile zokushabalalisa ukushisa kwama-LED, ahlobene kakhulu nempilo yokusebenza kwama-LED. I-substrate esezingeni eliphakeme yokushisa kwe-aluminium ine-conduction enhle nekhono lokusabalalisa ukushisa, futhi ifaneleka kakhulu kwimikhiqizo edinga amandla aphezulu okusabalalisa ukushisa, ikakhulukazi ama-LED aphezulu.
Ama-Luminaires angaphakathi komhlaba
Ukukhanyisa okungaphandle kwangaphakathi
Inothi elibalulekile: Sizobeka phambili imilayezo efaka phakathi "igama lenkampani". Sicela uqiniseke ukuthi ushiya lolu lwazi "embuzweni wakho". Ngiyabonga!
Ihhovisi lezentengiso: Igumbi 702, iZhe Jiang Commercial Building, No. 430 Dongguan Avenue, Nancheng District, Dongguan City, Guangdong Province, China
Ucingo: +86 769 2302 2798;
Ucingo: +86 769 8523 2755;
Sithumele i-imeyili: info@eurborn.com